Umgangatho wokukhula kweenwele zeLaser - abavelisi bokukhula kweenwele zeLaser, abaXhasi
I-650nm 808nm i-Laser kunye nomatshini wokukhulisa iinwele we-LED / umatshini we-laser wokumila kwakhona kunyango lokulahleka kweenwele
Unyango lwe-laser yonyango olusezantsi yindlela ekhuselekileyo yokukhanya / unyango lobushushu phantsi kophando ngeendlela ezahlukeneyo ezibonisa impilo. Isetyenziselwa ukunyanga iintlobo zofuzo zokulahleka kweenwele eziqhelekileyo kumadoda nabasetyhini, i-androgenetic alopecia okanye i-balding pattern.
Unyango lwe-laser ephantsi ikwabizwa ngokuba lonyango olubomvu lokukhanya, i-laser ebandayo, i-laser ethambileyo, i-biostimulation kunye ne-photobiomodulation.
Amanqanaba amatsha amayeza e-anti-hair ukulahleka kweenwele kumatshini we-650nm diode laser umatshini ophindayo
1. Unyango lokulahleka kweenwele kunye nokuqina kokuqina kweenwele kumadoda nabasetyhini
2. Unyango lokulahleka kweenwele okubangelwa yi-endocrine egqithisileyo
3. Unyango lokulahleka kweenwele okubangelwa yingxaki yentsholongwane yentsholongwane kunye nemithambo-luvo
4. Unyango lokulahleka kweenwele emva kokubeleka
5. Unyango lwe-alopecia areata, ukonyusa ukomelela kweenwele kunye nokhathalelo lweenwele emva kokufakelwa kweenwele.
I-laser kunye nomatshini wonyango wokulahleka kweenwele
1. Massage Nentloko enesihlwitha yohambayo, ukukhulula luvo entlonzeni, ukukhuthaza
2. Sebenzisa ipillailla yedermal
3. Yomeleza umsebenzi wepapilla weenwele
4. Ukukhuthaza ukuveliswa kwakhona kweeseli zoboya
5. Ukulawula ukufihlakala kwamadlala ahlaziyayo
6. Ukuphucula ukwahlula iiseli zoomama
I-Sano CE evunyiweyo yoNyango lweLahleko yoNyango lweLLLT ngomatshini / Ukukhula kweenwele zeLaser
Umatshini wokuphindaphinda iinwele zimbini iintlobo zelaser kunye nezintathu ezikhokelwayo
I-laser ye-650nm: Lungisa ii-follicles zeenwele, ukuphucula amandla okuhlaziya kwakhona kwe-collagen fibers kunye nokukhuthaza imetabolism.
I-laser ye-808nm IR: Ukukhawulezisa ukujikeleza kwegazi, ukukhuthaza ukufunxeka kwezondlo, ukuphucula impilo ye-scalp kunye nenqanaba leenwele
Ukukhanya okubomvu kwe-LED: Ngaba kunokwenza into yeseli inyuswe, ukukhuthaza iiseli zemetabolism, ukukhawulezisa ukujikeleza kwegazi, ukulawula ukugcinwa kweoyile.
Ukukhanya okuphuzi kwe-LED: Nge-580nm ye-wavelength inokunyanga kwaye inyange isikhumba esinovakalelo ngokufanelekileyo
Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kwe-LED: Bulala intsholongwane ye-bacterial pathogenic ngokufanelekileyo, bulala ukungunda okufihliweyo kunye namangolwane anzulu kwizintlu zoboya
I-SH650-1 i-Laser yeNqanaba eliPhantsi + Umatshini wokuhlaziya iinwele ze-LED kunyango lokulahleka kweenwele
Unyango lwe-SH650 yeLaser yeenwele sesona sixhobo sinyango sinamandla kwaye sisebenza kwinqanaba elisezantsi lonyango lwaselukhweni olukhoyo ngoku kwintengiso yamanye amazwe. Sebenzisa i-laser ye-diode ye-650nm (5mw), i-808nm IR laser (5mw) kunye neentlobo ezintathu ze-LED, i-SH-650 inesakhono sokugcwalisa yonke indawo entlonzeni ngokulinganayo kwaye inika amandla aneleyo okungena ngokuchanekileyo ezinweleni, oko ke kukwandisa iziphumo zesigulana .
Unyango lweLaser yoKhula kweenwele- unyango lwe-laser yokulahleka kweenwele nge-Sano laser
Unyango lweLaser lweenwele lusebenzisa i-lasers ezikumgangatho wezonyango ukuhambisa ukukhanya okukhuselekileyo, kwinqanaba elisezantsi kwelasisi kwindawo yakho. Unyango lwe-Laser luyafana nokunkcenkceshela izityalo. Njengamanzi kunye nezakha mzimba ezifunxwe zizityalo, amandla ombane athathwe ziifollicle zakho zeenwele ukuze iinwele zakho ziqhubeke nokukhula. Njengokuba ukukhanya kufakwa, i-microcirculation iyanda, ke ngoko ukuhambisa igazi elininzi ngakumbi kunye nezondlo kwifollicle yeenwele. Ukukhanya kwelaser okuphantsi kuvuselela imisebenzi yeselfowuni kwiifollic zakho ukunceda ukunciphisa ukulahleka kweenwele ngelixa unceda ukubuyisela iinwele.
I-808nm laser 650nm laser yonyango yokulahleka kweenwele ngomatshini ngetekhnoloji ye-LLLT
I-LLLT lunyango lwalahleko lweenwele ezingaphiliyo zangoku ezisebenzisa ukukhanya kwe-laser ukukhuthaza ukukhula kweseli kunye nokunyuka kweefollic hair. Kuyanceda ukulwa nokulahleka kweenwele kunye nokuphucula umthamo kunye nokubonakala kweenwele. Unyango alunantlungu kwaye alunaziphumo zibi.
I-LLLT yamkelwe yi-FDA njengonyango lokulahleka kweenwele kumadoda nabasetyhini. Isetyenziselwa ukunyanga i-androgenetic alopecia okanye into edla ngokubizwa ngokuba yimpandla yamadoda okanye yabasetyhini.
Iinwele ze-laser zokuphinda zibuyele kumatshini we-laser kumatshini wamadoda / izixhobo zokubuyisa iinwele ezivela kwi-Sano laser
Unyango lweLaser yeenwele lunyango olungelulo olomichiza, olungasokuze lusetyenziswe oluqhelekileyo kunyango lokulahleka kweenwele. I-LLLT (unyango olusezantsi lwe-laser) ihanjiswa sisixhobo esiqulathe iiphaneli zelaser ezikhanya entlonzeni. I-SH650-1 ye-laser umatshini wokuphinda usebenze kwakhona yinkqubo ephezulu yonyango yokulahleka kweenwele, esekwe kwi-650nm kunye ne-808nm ye-diode laser technology.
I-SH650-1 ye-laser unyango lokulahleka kweenwele kumatshini wokukhulisa iinwele kwakhona sano laser
Ukukhawulezisa ukujikeleza kwegazi ekuphuculeni ukuhlaziywa kwe-collagen fiber kunye nokwanda kwemetabolism.
I-650nm laser kunye ne-630nm PDT zisetyenziselwa ukuphucula umsebenzi we-Adenosine Triphosphate (ATP) kwizicwili ezingaphantsi. I-ATP sisiseko esiphambili sokuhambisa amandla phakathi kweeseli ukukhuthaza imetabolism yethishu. I-650nm laser kunye ne-625nm PDT ivuselela ukuhamba kwegazi kwaye ithwala ioksijini kunye nezondlo kwizintlu zeenwele, ngelixa i-808nm laser inceda ukungena - konke oku kunciphisa kakhulu ukuqhubela phambili kokulahleka kweenwele.
Ubuhle be-CO2 Laser, Shr IPL Khetha, Umatshini weLaser we-Co2, Umatshini wokukhuthaza izihlunu ze-Ems, Ukususwa kwamabala amabala, Shr Opt Ipl Ukususwa kweenwele,